ikhaya STARS STARS U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts
Ngamana 1, 2017
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-football genius eyaziwa kakhulu ngeNqampu; 'Auba'. Ibali lethu le-Aubameyang yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Qalisa.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi boBantwana bokuqala
U-Pierre-Emerick u-Emiliano François Aubameyang wazalelwa eLaval, eFransi ngo-18th kaJuni ngo-Juni 1989 nguyise waseGabon, uMnu Pierre François Aubameyang "Yaya", owayengummeli webhola yebhola yaseGabon kunye nomama waseSpeyin, uNksz Margarita Crespo Aubameyang, umnini-mveliso / ishishini umfazi.
U-Aubameyang uyi-half cast who ulwabelana ngokubemi baseFrentshi naseGabon. Ngaphandle kokungathandabuzeki, umbono wakhe womxube odibeneyo ubonakala ngokucacileyo kwesikhumba sakhe somnquma. Wena awuzange uchithe ubomi bakhe bomntwana eFransi naseGabon ngoxa ukhula. Wakhulela eMilan, eItali apho uyise wakhe wasebenza njenge-scout kwi-AC Milan.
U-Pierre-Emerick u-Aubameyang wayengumntwana wezinto eziphathekayo. Wayekunandipha amava afanelekayo ebuntwaneni, enye eninzi ubudala ayeyifunayo. Ubawo obadlali bebhola ebhola bebhola ekwenzeni ibhola yebhola enye yeqela elikhulu kwihlabathi ngokuqinisekileyo lithetha inzuzo ku-Auba.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Uyise wakhe (ochazwe ngezantsi) wayejongene nokuphuhlisa nokuhlalutya italente ye-Auba. Njengomdlali ophezulu we-AC Millan kunye nomntu onempembelelo kunye nokuxinana okunzulu kwibhola, ukulungisa unyana wakhe we-3 kunye nabasebenzi bakhe ngokuqinisekileyo, kwakungeyona into enzima.
UPierre-Emerick uAubameyang nabazali -Bomi boBomi
Kufanelwe ukukhankanya ukuba uMnu Pierre François Aubameyang owaziwa ngokuthi "Yaya" wayengomnye wabalondolozi abakhulu beAfrika ngexesha lakhe elivela kwi-1982 ukuya kwi-2002. Wayebamba iqela kwiqela lamazwe ngamazwe aseGabana kwi-1994 ne-1996 yeNdebe yeZizwe zeAfrika kwaye idlala kumaqela aphezulu eFransi. Amaphupha akhe ahlale ephakamisa oonyana abaya kuqhubeka nefa leAubameyang.
Nje ngoNyana Ofana no-Aubameyangs
yakhe umama, UNksz Margarita Crespo Aubameyang Ngakolunye uhlangothi uye wasoloko exhasa izigqibo zomyeni wakhe ukuba unyana wakhe anamathele kwicala lakhe. Ungumfazi waseFransi ovela kwisiSpanish.
Oku kufanelekileyo ukuphawula ukuba igazi leSpeyin liphinde lidlulele kwiimvumba ze-Auba. Idolophu kamama ka-El Barraco (ehlala ecaleni lasentshonalanga yeMadrid) uye wakhiqiza amanqaku amaninzi ebhola bebhola kule minyaka.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ungumntu Wentsapho
Ukusuka kwibhola, i-'Auba ', ubizwa ngokuba ngumntu opheleleyo wentsapho othanda ukuchitha ixesha kunye nentombi yakhe uAlysha kunye nendodana, Curtys ozinikezelayo uSpiderman kunye nemibhiyozo yokuxosha.
Ngokutsho kweAuba "Uthando luyinto entle kuzo zonke iifom kodwa ke, mhlawumbi, ukuhlukana okuthethekileyo kunye nokungaqhelekanga kwothando kuvakalelwa ngu-Alysha kunye neeCharty"
"Undiphe amandla," Wathi uyise oziqhenyayo, onamaxesha amaninzi amabhethi athwala igama lendodana yakhe "Curtys".
Ngamazwi akhe, "Into ephezulu kuphela ekhaya kwindodana yami uChartys kwaye thina sibini sibuka uBatman noSpiderman kwiTV rhoqo ngezikhathi"
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Umbhola uMzalwana
Unabantakwabo ababini abadala abaqeqeshi bebhola. Enyanisweni, bonke abathathu baqala imisebenzi yabo kwi-AC Milan.
Into ongaziyo ngabazalwana baseAubameyang
Nangona uPerre-Emerick ekhulile, abanye baqhubeka bezama ukufumana ukuhlonzwa kwehlabathi. Umntakwabo omdala uCatilina naye ungumhlaba waseGabon, owenza izinto ezimbalwa phakathi kwe-2000s, ngoxa uWilly ungumhlaba wonke kodwa okwangoku udlala kwiqonga eliphantsi laseJamani.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Boy Dad's Boy
Ngokungafani nabazalwana bakhe, u-Auba uyithandwa nguyise. Akayikumhlonela kuphela kodwa ulandela ingcebiso yakhe kwimicimbi yezoshishino kunye neentsapho.
Ngokwamashishini, izigqibo zebhola ezibandakanya iingxoxo zokudluliselwa kunye nokukhethwa kweeklabhu zenzelwe ubaba wakhe omkhulu. Wena, izigqibo ezenziwe ngoku ziphumelele. Ngokomzekelo, kwakukho ixesha uSteen efuna ukuthengisa uAuba eNewcastle. Ubaba wakhe wenqaba waza wenza unyana wakhe avumelane noDortmund. Ngokutsho kweAuba, "Saba ngumgqibelo kwi-Champions League kuba ubaba wafunda umdlalo weDurgmund kaJurgen Klopp, nangona imali yayingaphantsi."
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -I-Speed ​​Speed
I-Pace yinto ecacileyo oya kudibanisa noPerre-Emerick Aubameyang. Amandla akhe amakhulu. Ukhawuleza ngokukhawuleza ngokukhawuleza kunye nexesha elide kwaye unokukwazi ukuqhuba ibhola kakuhle ngexesha elifanayo. Uye wavalwa kwiimitha ze-30 kumasekhondi angu-3.7. Oku kwathiwa likhawuleza kunomkhosi weemitha wamamitha we-Olympic 100 kunye nomnini we-record record- Usain Bolt.
Nangona, uye wacela umngeni kwi-100 yemitha ngomncintiswano waseJamani uJulian Reus kodwa akazange amkele umngeni.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Imisebenzi yokuqala
Kwi-2007, wabhalwa kuyo AC Milan i-academy nguyise, unyaka wama-giantali aseItaliya yaba yiqela laseYurophu. Akazange adlale umdlalo weRossoneri kwaye akazange akwazi ukuzibonakalisa njengomdlali weqela lokuqala. Kunoko, wabhalwa ngamatyala kwiiklabhu zaseFransi ezifana neDijon, uLille neMonaco. Ku-2011, wasayinwa kwisivumelwano esingunaphakade sikaSt. Etienne apho wazuza khona iinjongo ze-31 waza wabizwa ngokuba ngumdlali weLigue 1 African of the year for 2012.
Wayenomsebenzi wokuguqula umsebenzi kunye nomqeqeshi uSt. Saint-Etienne uChristophe Galtier. Ngokomqeqeshi waseFransi,
"Nangona akuzange kwenzeke yonke into ehamba phambili ku-Auba ekuqaleni. Ndabona into enye kuye. Yiyo ijubane. Ndabona ngexesha lokuqeqesha ukuba wayengumdlali webhola elikhawulezayo endiyifumene nalo. "
Ngeminyaka eyi-20, uPeter wadlala iqela leFrench U-21 emva kokubizelwa kwinqanaba lase-Italian U-19. Wathuthela eJalimane eBorussia Dortmond e-2013 kwaye kuye kwavela omnye wabadlali abaphezulu kwiBundesliga. Wajoyina i-BVB kwingxelo ye-13 yezigidi.
Nangona uPerty wazalelwa eFransi aze adlale iGabon njengomphathi wecala lokuqhubela phambili umgca webhola lebhola le-Aubameyang apho umzalwana wakhe uCatalina wayenze. Uvuyiswa kwaye uhlonishwa ukuba abantwana bakhe bafuna ukulinganisa.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ukwenza iMbali
U-Aubameyang ungumdlali wokuqala waseGabon ukudlala kwiBundesliga okanye nayiphi na enye igoli laseJamani. Wenza intetho yakhe ngo-Agasti 10, 2013 emva kokujoyina iDortmund ngoJulayi waloo nyaka. Wayenombono wokuphupha ngokubamba iqhosha lokudlala emdlalweni wakhe wokuqala, owadlalwa neC FC Augsburg.
Kwakhona kwiincwadi zembali, NgoJulayi 2012, uAubameyang waya eLondon ukumela iGabon kwiMidlalo yeOlimpiki. Ngomdlalo wokuqala wokulwa noSwitzerland wafumana umgomo wokuphela komdlalo, oza kugqiba ukuba ngumgomo kuphela uGabon uza kubaleka kumncintiswano. Le yayiyiyokuqala yeGabon kunye neyokuphela kwinjongo efunyenwe kwiiOlimpiki. Emva kokufumana iinjongo ze-19, u-Pierre-Emerick Aubameyang ungumdlali weyona njongo ephezulu yaseGabon.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Iimoto
Njengoko i-speed international ye-Gabon isantya-ntsimi, kuyinto engokwemvelo ukuba kufuneka ujabulele ubomi ngokukhawuleza.
Uthando luka-Aubameyang kwiimoto ezihamba phambili
"Kuhlekisa ukuba neenqwelo ezifana nale," Utsho ngoM Lamborghini Aventador yakhe. Inombolo yeqela le-Aubameyang lifumaneke nakumavili emoto yakhe, nangona ngoku iqhuba iMartorghini.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Wonder Boots
Udla ngokuba nguMnu Glamorous. U-Aubameyang akayena umdlali wakho oqhelekileyo nangona naluphi na ucalulo lweengcamango, ngakumbi xa kuziwa kweengubo.
U-Pierre-Emerick Aubameyang amabhoti aqhelekileyo
NgoDisemba i-2012, wayenxibe izibhothi ezinamakhristal ngaphezu kwe-4,000 Swarovski kunye noyilo olubandakanya igama lakhe, inombolo kunye neeklabhu zakhe kunye nembala xa befudumala kumdlalo we-Olympique Lyonnais.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ucinga ukuba ngu-SPIDERMAN
UAubameyang unamava adlulileyo xa kuziwa kwimibhiyozo ye-superhero. Olu dumiso ku-Spiderman luphefumlelwe ngunyana wakhe uChartys ohlala ehleli kwiindawo zokujonga ibhola lakhe lidlala ibhola. U-Aubameyang wabonisa umthendeleko omkhulu wendodana yakhe emva kokufaka i-Dortmund kwi-2014 Supercup eBayern.
I-Pierre-Emerick Aubameyang Spiderman Celebrations
Indodana yakhe ngumqhubi omkhulu wamaqhawe ezincwadi ze-comic kwaye uthanda ukuvela kwi-mask Spiderman njengoyise.
Iimbasa ze-Auba zikaSpiderman
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ucinga ukuba nguBATMAN
Xa engakwazi ukufumana izixhobo zakhe zeSpiderman, ujika kuBatman.
I-Auba yeBatman Celebration
U-Auba ngumxhasi we-mega waseBatman. Uhlala engumntu kuyo yonke intlanganiso yendibano egqoke iingubo zikaBatman ngonyana wakhe. Oku kubangela ukuba abaninzi bamangaliswe Yazi nge Dark Knight.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ulungele ukugqoka iMask ngexesha lokubhiyozela
U-Auba wabuya wahlawuliswa ngokubeka i-maski efunyanwa yi-Nike ngexesha lokubhiyozela.
Intlawulo yahlelwa ngeenxa zonke kwi-50,000. Kamva kwaqinisekiswa ukuba i-mask yazinikezelwa kwi-Nike Hypervenom Phantom "I-Strike Night" ebhokwe.
U-Dortmund olawulayo u-Hans-Joachim Watzke utshele iphephancwadi likaKicker: 'Akunakuba yiloo Nike ezama ukunyusa iimfuno zezoqoqosho ngale ndlela.'
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Uthando lwaseAfrika
I-Auba ye-tatoo yaseAfrika ihlobisa umzimba wayo kwaye ikhulise umphefumlo wayo nothando lwelizwekazikazi.
Ewe ungumAfrika, kungekhona ngenxa yokuba wayezelwe ngumAfrika, kodwa ngenxa yokuba iAfrika yazalwa kuye.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Uthanda iBhola kuphela
Ewe unxibe izicathulo ze-Crystal, iimaski ze-spiderman, i-Batman capes - ekuqalekeni. Ngaphandle kokungabaza, i-Auba yinto ekhethekileyo yodumo lwebhola.
Xa uhlolisiswa ngakumbi, uya kugcina ukuba umhlaseli akayena mntu ucinga ukuba ungaphandle kwebala lokudlala. Ngokomhlobo wakhe osondeleyo uChristophe Jallet,
"U-Aubameyang ngumfana okhulileyo, ongabonanga iiklabhu zobusuku, akaphuzi utshwala aze ahlale ephupha ngebhola".
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Style Hair
U-Auba uxhalabele kakhulu ngeenwele zakhe. Ungomnye wabalandeli abambalwa abaphula umthetho wenkundla kaPoorg Pogba. U-Pierre-Emerick u-Aubameyang ubeke uPaul Pogba ngesaziso - kungekhona kwinqanaba, kodwa ngeentloko zakhe.
Umnini weNdlu yeHlomelo ephezulu kwiBhola
Unenwele enkulu kunazo zonke phakathi kwabadlali bebhola.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Summersault Master
U-Miroslav Klose wayezisebenzisayo, ngoku u-Aubameyang wenza njalo. Zakhe iziganeko. U-Pierre-Emerick uAubameyang uxelele NeMidlalo yeBild Uyazi ukuba iimbasa zakhe ze-somersault zi "Kungabi nengozi" emva kokubongozwa ukuba ayeke kwiQumrhu lebhola leBhola leGabon kunye neengcali zonyango.
Auba- I-Somersault Master
Enyanisweni, i-Auba iyanquma ngokukhawuleza emva komnqophiso ngamnye ukuba ingaba okanye ingayithathi, kodwa yenza njalo emva kokuxabana okubalulekileyo.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ukuhlonipha iCrespo
Akukho nqabana umdlali webhola ehlabathini oye wafaka igama lomnye umbhola webhola ezandleni zakhe. I-Auba yinto ehlukile kulo.
I-Tubao ye-Auba yeCrespo
Ibhola lika-Aubameyang lokuBantwana: iHernan Crespo
Uthabatha isithixo sakhe, ngumqhubi wase-Argentina "Hernan Crespo" ekhohlo lakhe lesobunxele. Iingxelo zibonisa ukuba UHernan Crespo uhlobene nomama obizwa ngokuba negama. U-Aubameyang ungumdlali ozimela ngokwakhe weHernan Crespo kwaye umbiza njengomzekelo wakhe omkhulu kumdlalo.
Ngokutsho kwe-Auba, "iCrespo inamandla, isomelele emoyeni, isinekhono kunye nesigxina somdlali," watsho umkhabi. U-Auba usebenzisa ezininzi zeesithuba zakhe zokuqeqesha iiseshoni ekujongeni ubuchule bokuqhwaba i-crespo.
Ngokutsho kweAuba, "I-Crespo yiinkcazo ze-Poacher. Akunakwenzeka ukuba ahlanganyele ekwakheni kwaye angabonakali umdla omkhulu ekuqhubeni imigca yokuzimela. Uhamba ngokuncinci kakhulu ngaphandle kwebhokisi. Kodwa ngaphakathi kwebhokisi, uyazi indlela yokuhamba. Uyazi apho iibhola ze sibini ziya kuphelisa. Uyazi ukusetyenziswa kakubi nayiphi na indawo encinci yendawo eseleyo kwi-6 yd ibhokisi. Ndifunda imihla ngemihla ukuba njengaye. "
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -KwiBomiBogger Rankings
Sithobele izibalo zethu zokuthandwa nguPeter-Emmerick Aubameyang.
Ibhola lebhola laseGabon
Ngamana 25, 2019
Februwari 12, 2017